Xog: Khasaaraha soo kala Gaaray Dhinacyadii shalay ku Dagaalamay Degmada Badhaadhe | KEYDMEDIA ONLINE
Xog: Khasaaraha soo kala Gaaray Dhinacyadii shalay ku Dagaalamay Degmada Badhaadhe
Kismaayo (Keydmedia) - Shalay iyo wixii ka horeeyay Degmada Badhaadhe ee gobbolka Jubbada Hoose waxaa ka socday Dagaal aad u xoogan oo aanan waxbo la iskula harin kuwaasoo u dhaxeeyay Ciidamada uu hogaaminayo Dhagar-qabe Worlord Gaandi, Kenya, Kooxda Raaskaambooni iyo Kooxda Shabaabka.
Dagaalkaasi sida aan wararka ku helnay waxaa ka dhashay Qasaaro aad u badan oo isugu jirta Dhimasho, dhaawac iyo sidoo kale saanad kala qabsaday.
Ilaa hada sida la xaqiijiyay Dagaalkii shalay ka dhacay nawaaxiga Badhaadhe waxaa Ciidamada Huwanta ah uga geeriyooday 25 Askari halka khasaaraha dhaawac ee soo gaarayna uu kor u dhaafaayo 40 askaro oo ay ku jiraan dad qaba dhaawacyo aad u daran.
Dhaawacyada Ciidamada Huwanta ah waxaa loo qaaday Isbitaalo ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee isla Jubbada hoose.
Ciidamada Kenya oo iyagu si weyn ugu qeyb qaadanaayay ayaa waxaa dagaalkaasi ugu geeriyooday 65 Askari, waxaan ku dhaawacmacmay 100 Askari.
85 oo ka tirsan Maleeshiyaadka Shabaabka ayaa ku geeriyootay Dagaalka 24 kii saac ee aynu ka soo gudubnay ka dhacay nawaaxiga degmada Badhaadhe, ayadoona ay jiraan dhaawacyo badan oo ay kooxda Shabaabka qaatay kuwaasoo oo la geeyay magaalada Kismaayo.
Dagaalka Ciidamada Kenyaanka ah iyo kuwa Soomaalida waxaa ay ku qabsadeen baabuur iyo hub halka iguna laga gubay baabuur waaweyn oo kuwa dagaalka ah.
FG: Raadinta Arruurinta xoggtaan waxaa ay Keydmedia ku howlanedy Aaacadihii ka dambeeyay markii uu dagaalkaasi dhacay, ayadoona warkani aynu ka helnay illo ku dhadhow dhinacyada dagaalamay.
Gaalkacyo oo Golle deegaan loo sameeyay
Warar 22 October 2020 23:20